Digital Nchekwa na-enyere Post Production N'oge Ọrịa na-efe efe | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Mgbasa Injinia Mgbasa Ozi
Home » content Management » Nchekwa Dijitalụ na-eme ka nrụpụta post n'oge ọrịa na-efe efe
Nchekwa Dijitalụ na-eme ka nrụpụta post n'oge ọrịa na-efe efe
Ọrịa na-efe efe Covid-19 emeela ka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta post gaa ọrụ dịpụrụ adịpụ. Nke a emeela mgbanwe na ụzọ e si echekwa ọdịnaya mgbasa ozi. Otu ihe dị mkpa bụ ịdabere na nchekwa igwe ojii, ma ọ bụ site na data nzuzo ma ọ bụ site na ndị na-eweta nchekwa igwe ojii. N'isiokwu a, anyị ga-ele anya na amụma anyị maka uto nke nchekwa nchekwa post na mgbe ahụ bụ onyinye na nghọta sitere na 2020 IBC, 2020 NAB Gosi New York na nkenke ụlọ ọrụ dị iche iche nke ga - enyere ụlọ ọrụ na - emepụta ọrụ aka ịga n'ihu na - arụ ọrụ, na - achịkwa ọnụ ahịa ha ma na - abawanye ọrụ ha.
Onu ogugu di n’okpuru na -eche onu ogugu kwa ubochi n’ime ikike nchekwa maka imeputa ihe, tinyere NLE, na-aputa ihe jikotara ya na netwok nwere ikike nchekwa ihe.. Anyị na-agụnye iche iche nke dịpụrụ adịpụ (igwe ojii) nchekwa maka arụmọrụ arụmọrụ. Rịba ama na n'ihi ọrịa Covid-19 na ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ site na ọtụtụ n'ime 2020 na ikekwe akụkụ nke 2021 anyị na-arụ ọrụ dị egwu na ojiji nke igwe ojii nchekwa maka post-mmepụta malitere na 2020 ma e jiri ya tụnyere 2019 (site na 8% rue 20% n'otu n'otu) ma na-aga n'ihu na-abawanye site na 2025.
Site na uto nke igwe ojii na -ewepụta post-mmepụta anyị ga-ebu ụzọ lelee mmepe nke na-etinye nchekwa igwe ojii na mgbasa ozi na arụmọrụ sitere n'aka ndị mgbere dị iche iche.
Igwe Nchekwa maka imepụta Post Production
uchuIhe nchekwa nchekwa Nexis 2020 na-enye arụmọrụ arụmọrụ na ebe ọ bụla na mgbasa ozi bara ọgaranya. Ọ na-enyekwa 40% nchekwa nchekwa ọzọ n'otu akara ahụ site na iji ikike HDD dị elu, na-ebuli ọdịnaya gosipụtara iji wepu oge nkwụsị na ọnwụ data yana ọnụọgụ nchekwa mgbanwe na-agwakọta na-ogige na akụ ojii. Ọ na-enyekwa nkwado sara mbara maka ngwaọrụ ndị ọzọ.
Mmasị n'iji igwe ojii na-arụ ọrụ post-Production na-eto. uchu mere nyocha nke ndị ahịa ha na 2020 tupu ọrịa ahụ metụtara Covid-19 wee hụ na naanị 20% nke ndị ahịa anaghị eme atụmatụ iji nchekwa igwe ojii, ebe 40% kwuru na ha ga-eji ihe na-erughị 100TB, 30% kwuru na ha ga-eji 0.5-1PB na 10% kwuru na ha ga-eji ihe karịrị 1PB nke nchekwa igwe ojii. Ihe osise dị n'okpuru na-egosi uchuUsoro nke ngwaahịa nchekwa gụnyere uchu Nexis / Cloudspaces iji jikọta na-ogige na nchekwa igwe ojii.
uchu kwukwara na o meela mwepụta dị nro nke na-agba ọsọ uchu Media andiwet na a mebere igwe na iji Kubernetes containers na-edezi gburugburu ebe obibi, enweta site na iji Teredici, na Nexis ígwé ojii nchekwa enye edit on-ina dị ka e gosiri n'okpuru.
Akara Akara na-egosi n'ebe ahụ Portal Access Portal, ngwa 1U Linux nke na-enyere ohere nnweta nnweta nchekwa na-maka ogige maka ma zighachi akwụkwọ nnọchiteanya na nnukwu mkpebi arụmọrụ, dị ka egosiri n'okpuru. Rịba ama na onye ahịa dịpụrụ adịpụ HDD ma ọ bụ SSD nwere ike iji dị ka oghere mpaghara iji melite arụmọrụ.
Usoro mmekorita na-eme n'azụ na-enweghị onye editọ na-eme ihe ọ bụla na ọrụ echekwara na-arụkọ ọrụ na-akpaghị aka ka ndị ọzọ nwee ike ịhụ mgbanwe ndị ahụ.
Editshare e nyere ya NAB Gosi ngwaahịa onyinye afọ na ọgbakọ 2020 NAB NY. Companylọ ọrụ ahụ wepụtara nsụgharị ọhụrụ nke faịlụ faịlụ EFS 2020 ya na July 2020. Dị ka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo, “Usoro faịlụ kachasị mma nke mgbasa ozi na-egosipụta ndozi nchebe na ọkwa ọ bụla na arụmọrụ dị elu n'ofe osisi ahụ. Na mgbakwunye na ngwaọrụ njikwa nchekwa dị ike etinyere n'ime EFS, ọhụrụ RESTful API meghere ọnụ ụzọ maka ndị ahịa na ndị mmekọ teknụzụ iji rụọ ọrụ arụmọrụ njikwa nchekwa nchekwa na gburugburu ebe nchekwa. Ofụri Esịt dakọtara na ọhụrụ mbipute nke ifuru, EFS na-enyere media òtù na-ewu ọtụtụ mmekota workflows, echebe ihe pesonel si akpata oru mgbagwoju mgbe akwadebe teknuzu ìgwè na a keukwu set nke media management ngwaọrụ. ”
Versiondị EFS kachasị ọhụrụ na-akwado igwe ojii workflows gụnyere AWS, Tencent Cloud na ndị ọzọ. Ndị njikwa IT na ndị nchịkwa nwere njikwa ọka grained na njikwa ọdịnaya, nchekwa folda yana usoro ọdịnaya iji mee ka mmekọrịta ka mma na arụmọrụ ọtụtụ saịtị na ọtụtụ ọrụ.
Dezie ya kwukwara na ọ na-enyere ndị mgbasa ozi na ụlọ ọrụ mgbasa ozi aka ịbawanye mmepụta mmepụta ọdịnaya ha dịpụrụ adịpụ site na EFS òkè nchekwa ya na ngwọta njikwa mgbasa ozi nke FLOW. Companylọ ọrụ ahụ kwuru na n'oge ọrịa a na-efe efe, ụlọ ọrụ Philippine Long Distance Telephone (PLDT) mejuputara ngwakọta mmekorita nke ndị comnpany iji rụọ ọrụ karịa akwụkwọ ọrụ aka 50 ma bulie mmepụta ọdịnaya dịpụrụ adịpụ site na 40%. Ihe onyonyo a n’okpuru n’egosi mmeputa ihe eji eme n’ime ime ihe n’eji Dezie ya ngwaahịa
Facilis nọ na 2020 mebere NAB egosi NY Facilis na-enye arụmọrụ dị elu nkekọrịta nchekwa maka nrụpụta mgbasa ozi. Mmekọrịta ụlọ ọrụ ahụ na nso nso a gụnyere ụdị 8.05 nke Facilis Ikekọrịta Nchekwa Sistemụ, mbipute 3.6 nke sọftụwia FasTracker Media Asset Management na nke ọhụụ Facilis Mmekọrịta Edge maka nnweta dịpụrụ adịpụ maka ngosipụta.
The Facilis Ikekọrịta Nchekwa Version 8.05 gụnyere sọftụwị akọwapụtara mkpa bandwidth, SSD tiering na multi-disk parity. Ibu ụzọ nke bandwit na-enyefe ọrụ zuru oke na arụ ọrụ niile n'oge arụ ọrụ ọ bụla mana na-ebute ihe nrụpụta ọrụ iji nọgide na-ebuwanye ibu mgbe ihe nkesa na-abanye n'ọnọdụ nnukwu ọrụ. Ntọala nke mbu a di ike ma nwee ike imetụta arụmọrụ ndị ahịa n'ime sekọnd nke itinye.
Enwere ike ịkọwapụta Multi-disk Parity nke akọwapụtara sọftụwia ruo ihe ruru draịvụ anọ maka otu draịva n'otu, dabere na ọrụ ngo, nke mebere olu-dabere. Teknụzụ a na-enye ndị nwe usoro sistemụ aka ka ha chebe akụ ha ka ihe data ghara ịdaba n'ihi ịda ada. Emepụtara SSD na HDD iji nyefee ọsọ ọsọ maka ọrụ ndị chọrọ ọkwa SSD, ma na-ejigide enyo HDD na-adịru mgbe ebighi ebi.
Facilis Edge mmekọrịta na-amalite site na Facilis Ebumnuche nke igwe ojii nke jiri nwa amaala Facilis mebere olu dị ka mpaghara disk dị na mpaghara wee tinye nchekwa data Azure Cosmos DB nke raara onwe ya nye iji mekọrịta ọtụtụ desktọọpụ n'otu usoro faịlụ. Na Facilis Edge ọnụ nke arụnyere na ebe ndị dịpụrụ adịpụ, ụzọ nke faịlụ mgbasa ozi na faịlụ oru ngo bụ otu, ma ị na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'ụlọ. Mgbanwe ọ bụla ma ọ bụ mgbakwunye na faịlụ oru ngo a ka emelitere ozugbo. Ihe ogugu di n’okpuru
Cinesite sooro ya na Njirimara na AWS ka mmegharị ya na VFX pipelines leverage NjirimaraỌrụ data data ngwakọ iji nyefee vidiyo 16K sụgharịrị. Mgbe ị na-eche nsogbu mbipụta oge na ụyọkọ ụyọkọ nchekwa Cinesite zụrụ n'oge na-adịbeghị anya Njirimara, bụ onye wepụtara ngwa ngwa ngwaike ngwanrọ onsite ma mee ka ụlọ ọrụ na-agba ọsọ ọzọ.
Ka oge na-aga, iji gbanye n'igwe ojii ka o wee nwee ike ịsụgharị ikike ya, ụlọ ọrụ ahụ nwere nsogbu Njirimara nchekwa igwe ojii nke mere ka nzukọ ahụ nwee ike ịtụ igwe ma chekwaa data na AWS. A Njirimara ikpe ọmụmụ na-ekwu na “NjirimaraNgwanrọ ngwakọ sọftụwia na-agba otu sistemụ faịlụ a na igwe ojii dị ka nke dị na mbụ, yana data nwere ike ịbụ ihe ọmụmụ na enweghị nsogbu n'etiti etiti ma ọ bụ gafee mpaghara. Rstgbaji na 20, 200, ma ọ bụ ọbụlagodi 2,000 dị elu na-enye ọnụ ọnụ na AWS Njirimara idowe n'ike niile enweghị nsogbu. Enwere ike ịmalite oge na nkeji, ma kwatuo ngwa ngwa. “
Integrated Media Technologies (IMT) kwuputara na agwakọta SoDA sọftụwia ya na Dalet's Ooyala Flex Media Platform iji mee ka nfefe nke ọgụgụ isi na igwe na-amịpụta ọdịnaya dị n'igwe ojii. Mwekota nke IMT SoDA software na Dalet's Ooyala Flex Media Platform ka enyere na United States na Europe.
Ngwọta nkwonkwo ahụ ga-eleba anya na njikwa ihe njikwa data nke akụ dị mkpa site na ịkọwapụta nnyefe nke nnukwu data workflows mgbe ị na-ewepụta usoro ije data dị mfe maka ọdịnaya okike. Post mmepụta na ndị ahịa ọrụ mgbasa ozi ga-enwe ike ịkọ ọnụahịa na oge iji weghachite faịlụ site na iji SoDA tupu mbufe nchekwa, na-enyere ha aka ịme mkpebi dị mma na njikwa data yana ịdebe mmefu ọrụ na ma ọ bụ n'okpuru mmefu ego.
Dabere na igwe ojii na ọrụ imekọ ihe ọnụ ga-eto na ọkwa dị elu mgbe ahụmịhe ọrịa na-efe ugbu a agwụla. Ma n'igwe ojii ma ọ bụ na ogige, ihe nchekwa nchekwa siri ike dị iche iche ga-enyere ndị editọ aka ịnagide nhawanye nke ọdịnaya vidiyo nke chọrọ nchekwa arụmọrụ dị elu iji nye ezigbo ahụmịhe ndị ọkachamara a chọrọ. Ka anyị lelee ụfọdụ ihe nchekwa nchekwa steeti siri ike maka ụlọ ọrụ M&E.
Ngwọta Nchekwa Obodo siri ike
NetApp Cloud Cloud na-enye njikwa ebumnuche nke nchekwa ngwa yana data gafee ọtụtụ ndị na-eweta igwe ojii na ebe obibi. Mpaghara site na NetApp Product Suite na-enye igwe ojii akụrụngwa nchịkọta, njikarịcha ọnụahịa, njikarịcha ikike na njikarịcha ọrụ maka arịa Kubernetes. ONTAP 9.8 ụlọ ọrụ ahụ na-enye mmụba igwe ojii na nnweta data maka ngwa ngwa. ONTAP 9.8 na-enye ngwakọ igwe ojii cache architecture, nnweta na-aga n'ihu yana njikwa data jikọtara ọnụ na SAN, NAS na nchekwa ihe.
NetApp na-akwado nkwado mmemme Dreamworks ogologo oge, nke chọrọ nguzozi ikike nchekwa na arụmọrụ. Ihe omuma ohuru nke FAS500f (nke egosiputara n’okpuru) bu uzo nchekwa nile gbakwasara ike nchekwa (rue ihe 734TB ikike nke nwere ogbawanye gbasawanye) iji QLC flash SSD iji nye ikike di elu. Ngwaahịa a akwụsịla nkwado NVMe ma jikwa ya na ngwanrọ NetApp nke ONTAP. A na-eleba ngwaahịa ahụ anya na nnukwu olu data edozighi ahazi, dị ka mgbasa ozi na ntụrụndụ na mmegharị.
Na 2020 IBC ATTO na-egosi SiliconDisk RAM dabere, ngwa nchekwa arụmọrụ dị elu, yana ikike akpọsara nke 128GB na 512GB. Iji RAM, kama ịchekwa nchekwa ọkụ, ngwaahịa a na-enye arụmọrụ ka elu, maka ọnụahịa.
Ngwaahịa a na-enye latencies erughị 600 ns na ruo 6.4M 4K IOPS na nnyefe bandwidth data ruo 25 GB / s. Ọ na-abịa na ọdụ ụgbọ mmiri 4 100 Gb Ethernet maka mkpokọta 400Gb nke bandwit. Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, "A na-echekwa data ozugbo ma weghachite ya na oke ọsọ na-ahapụ gị ka ị dezie ọtụtụ iyi vidiyo, weghara ọnọdụ data maka AI / ML, gbanwee usoro data ngwa ngwa, ma na-enye arụmọrụ dị egwu na ntinye anya."
SiliconDisk gụnyere ezigbo ihe na - enye gị oge na - enye nchịkọta ọrụ maka njikọ netwọkụ nchekwa gị, itinye nchekwa na arụmọrụ data SiliconDisk. O nwekwara xCORE I / O osooso, njikwa na-agụ ma na-ede ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nhazi nhazi ọzọ. Ọzọkwa, iji DRAM, kama iji nchekwa nchekwa, usoro ahụ adịghị mkpa ijikwa eyi uwe mgbasa ozi.
Excelero kwupụtara na Osisi DigitalFilm jiri nchekwa NVMe ya na-agbanwe (NVMesh) iji nye 10X nhazi ngwa ngwa na 100X nchekwa ngwa ngwa. Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, “akọwapụtara ngwanrọ NVMesh kesara ngọngọ maka arụmọrụ arụmọrụ dị elu na-enye ndị ọrụ ike site na nchekwa ka mma. Ndị ahịa na-erite uru site na ịkekọrịta NVMe akụ na ntanetị, ịnweta iji wepu NVMe na ọsọ ọsọ mpaghara - na arụmọrụ nke karịrị njedebe ikike nke ọkụ ọkụ mpaghara na sava.
Na NVMesh ụzọ data na-aga naanị n'akụkụ ndị ahịa, na-etinyeghị usoro CPU n'akụkụ nkesa. Nke a na-adọrọ mmasị karịsịa maka ngwa hyperscale n'ihi na enweghị mmetụta ndị agbata obi na-adịghị mma. Akụkụ dị mkpa na ụlọ ọrụ NVMesh bụ TOpology MAnager (TOMA), ihe nchịkọta ụyọkọ ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi nke na-enye njikwa njikwa ụgbọ elu olu ma na-enyere ndị ọrụ data aka dịka RAID, nhichapụ data na ịkekọrịta data (n'etiti igwe ndị ahịa). E gosipụtara ụzọ data dị irè sitere na ngwa ahụ na nchekwa NVMe na foto dị n'okpuru.
Dị ka ihe atụ nke NVMesh na-arụ ọrụ, otu na-emepụta Prime Rewind: N'ime Bomụ nwoke, ihe ngosi nke oge nke 2 nke Amazon Prime Video's superhero and vigilante series Ụmụaka, Usoro DFT chere ule ihu na nchekwa nchekwa nchekwa Excelero ọhụrụ ya. Ndi otu mmeputa choro hazie 40 awa nke ndi ahia haziri, kwado ha, mee proxies maka edezi ngwangwa, weputa ha ma nyefee ha na ngalaba ndi editọ ha - n’ime nani 10 awa.
VAST na-enye ihe ọ kpọrọ Data Universal Universal Nchekwa nke na-eji Intel Optane NVMe SSD dị ka nchekwa mkpuchi maka nchekwa nchekwa QLC NVMe dị ka egosiri n'okpuru. Companylọ ọrụ ahụ na-ekwu na ụlọ ọrụ nchekwa a na-enye arụmọrụ dị ala ọnụ ala a na-eji eme ihe nkiri, egwuregwu na mgbasa ozi.
Ná mmalite nke IBC, Cloudian kwupụtara na HyperStore ihe nchekwa ihe nchekwa ihe dị ugbu a kachasị mma, na-enyere ụlọ ọrụ aka igbo mkpa nke arụmọrụ na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ha na-ebunye ndị ọkụ ọkụ na HDD dabere na iji ngwakọ ngwakọ na-enye ndị ahịa ohere belata na-eri 40% site na tiering obere ugboro ugboro na-eji data na HDD nchekwa. HyperStore dị ma ọ bụ dịka ngwanrọ-naanị ngwọta ma ọ bụ na ngwa ahaziri ahazi, HyperStore Flash 1000 usoro. HyperStore Flash 1000 na-enye ikike 77TB na 154TB na ụdị 1U facto ma gosipụta n'okpuru.
Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, “Cloudian ọhụrụ sọftụwia kachasị mma na-eweta arụmọrụ dị mkpa ma na-enyekwa uru niile nke usoro nchekwa ihe nchekwa nke Cloudian, gụnyere nkwekọ S3 zuru oke, nchekwa ụlọ ọrụ na njikwa njikwa dị ka ọtụtụ ụlọ oru-of-service. Flash-kachasị HyperStore na-eme ka profaịlụ I / O belata-latency profaịlụ nke mgbasa ozi na-arụ ọrụ na ngwaike ụlọ ọrụ, na-ebugharị ihe ele mmadụ anya ma nweta obere data latency na n'ọtụtụ. A na-akwado ikpo okwu Cloudian na ndị na-eweta NVMe na-eweta ngwaahịa dịka Intel na Kioxia na di Intel Optane-dị njikere maka ọbụna ukwuu arụmọrụ. ”
Open Drives kwupụtara nnweta nke Atlas 2.1 sọftụwia sọftụwia ya na-enye OpenDrives nchekwa nchekwa ya. Sọftụwia ọhụrụ ahụ na - arụ ọrụ n’elu ụlọ ọrụ ewepụtara Ultra Hardware platform, nke egosiri n’okpuru, nke ugbu a gụnyere NVMe SSDs na ngwaahịa Ultimate ya ma kwado ya na HDDs na ngwaahịa kacha mma. Egosiputara ha n’okpuru dika ngwa ngwa ngwa ngwa HDD.
Atlas 2.1 nwere njirimara na-enye ụlọ ọrụ ohere ịbawanye ụba ma na-arụ ọrụ arụmọrụ. Njirimara ndị a gụnyere: nchịkọta mkpokọta, sistemụ faịlụ kesara, nkwekọ, akpaaka akpaaka, njikwa etiti na visibiliti, nkwado nchekwa igwe ojii, yana nnweta dị elu.
Nchekwa Nchekwa na-enye ohere ngwaọrụ, ma ọ bụ ọnụ, ka a chịkọta ya ọnụ na-akpụ ụyọkọ. Parallellọ ọrụ a kesara nke a na-enyere ọtụtụ ọrụ dị iche iche aka n'etiti ụyọkọ ụyọkọ na-enweghị ịchụ àjà dị egwu dị ka ịba ụba oge.
Containerization eweta ọrụ dị ka compute na ngwa ahụ n'onwe ya nso ebe data bi na nchekwa. OpenDrives bịarutere na nsị site na echiche nchekwa. Site na nke a, ụlọ ọrụ ahụ na-ekwu na OpenDrives nwere ike nweta nnukwu arụmọrụ site na iji nghọta na nke ọma na-ebuga data na akpa.
Ọnọdụ akpaaka bụ ihe nkwado na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, na-enyere ọrụ ndị na-akpali akpali aka, dị ka omume oge ma ọ bụ omume dabere na faịlụ, iji mepụta ọrụ akpaghị aka nke na-agba ọkụ ma na-arụ ọrụ n'adabereghị na ọrụ ndị ọzọ. Idozi anya na visibiliti nke ọma site na otu iko nke iko na-enye ndị ọrụ nghọta nghọta arụmọrụ akụrụngwa ma na-enyere aka ịhazi ntọala ka mma ịhazi ọnụ na ụyọkọ nchekwa.
Nkwado nchekwa igwe ojii na-enyere ndị ọrụ aka izipu ma nata ma na mbara igwe na igwe ojii site na S3 protocol na ịkekọrịta S3 dịpụrụ adịpụ site na Mgbasa Ozi Ozi (SMB) na mpaghara. Nnukwu nnweta na-ejikwa arụmọrụ na-aga n'ihu ka ndị ahịa nwee ike hazie ọnụnọ njikere nke na-arụ ọrụ mgbe ngwaọrụ mbụ gbadara.
Igwe ojii na nchekwa siri ike-ala na-agbanwe ụzọ anyị si arụ ọrụ na ọdịnaya mgbasa ozi. Ma maka ndị ọkachamara na-arụ ọrụ n'ụlọ ma ọ bụ obere ụlọ nchekwa mpaghara nwere ike inye arụmọrụ kachasị elu. Ka anyị leba anya na nchekwa nchekwa mpaghara ọhụụ na emelitere maka ngwa M&E.
Ngwaahịa Nchekwa Ọrụ nke Obodo
Nkwa teknụzụ gosipụtara PegasusPro ya, na 2020 IBC, usoro Thunderbolt 3 DAS na NAS fusion sụgharịrị iji melite arụmọrụ arụmọrụ na mmekorita mgbasa ozi dijitalụ. Ngwaahịa a na-enyefe data ngwa ngwa site na DAS gaa 10GbE NAS na vise-versa site na iji teknụzụ FileBoost nke ụlọ ọrụ ahụ. Companylọ ọrụ ahụ kwuru na ọtụtụ mmadụ nwere ike jikọọ na PegasusPro site na Thunderbolt 3 ma n'otu oge kesaa ọrụ ha na ndị ọzọ na-enye aka na NAS. E gosipụtara akara ngwaahịa PegasusPro n'okpuru.
Seagate n’enye ya EXOS HDD JBOD yana ya Nytro All flash arrays.
Otu Kwụsị Systems nwere njiri mara ụlọ ntu njegharị na 2020 IBC. Companylọ ọrụ ahụ kwuru na ya, “na-echepụta ma na-arụpụta sistemụ arụmọrụ arụmọrụ dị elu maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ntụrụndụ na ụlọ ọrụ anya, na-eji ike nke PCI Express, ndị GPU na-eme ngwangwa kachasị ọhụrụ na nchekwa NVMe iji na-agba ọsọ ngwa kọwaa ngwa gụnyere usoro ntụgharị ikpeazụ, nnukwu ihe omume nyocha, ezigbo oge gbatịkwuru eziokwu na Ai enwekwuru vidiyo post-mmepụta. Onyinye OSS gụnyere nke mbụ PCIe Gen 4 nke ụlọ ọrụ na-enye ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-edekọ vidiyo na ugboro abụọ bandwidth nke usoro ndị dị ugbu a na 16 NVIDIA A100 GPUs na otu usoro. OSS na-anapụta AI na Fly ™ na-eweta arụmọrụ datacenter na ebe-na yana-studio workflows. ”
Synology kwupụtara DS1621xs + ya na 2020 IBC. Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, “ndị DS1621xs + na-ekerịta ihe nhazi Xeon dị ike dị na ngwaọrụ ndị ọzọ dị na Synology. N'ime 3.1 GB / s seq. gụọ na 1.8 GB / s seq. dee arụmọrụ pụtara na ọ nwere ike ịkwado usoro data buru ibu ma jikwaa ndị ọrụ, na ọsọ ọsọ ọsọ. A na-ejikọ ya na nchekwa ECC maka ntụkwasị obi kachasị, yana mgbe ejikọtara ya na Btrfs na nhọrọ ndabere data ndị ọzọ zuru oke, ndị ọrụ nwere ike inwe obi ike na data ha dị mma. E gosipụtara ngwaahịa n'okpuru.
Isii n'ime 3.5 "HDD bays na-enyere aka 96TB nke ikike nchekwa nchekwa. Mpaghara mgbasa na-enye ohere ịbawanye nke a na bays 16 na ikike 256TB. Ihe mgbakwunye 10GbE NIC nwere ike ime ka nsụgharị ngwa ngwa ma ọ bụ nyefee ngwa ngwa maka ọtụtụ igwe arụmọrụ. Ngwaahịa ahụ na-enye ọrụ NAS mpaghara, ebe ị na-enye ohere ịnweta ime ihe nchọgharị weebụ ma ọ bụ ngwa mkpanaka.
Symply webatara SymplyWORKSPACE nke emelitere maka IBC mebere 2020, StorNext6 kwadoro desktọọpụ multi-user Thunderbolt 3 SAN nchekwa sistemu nchekwa 2020 dabeere na njikwa akụ na ikike nwere nchekwa sitere na 48 TB ruo 366 TB, egosiri n'okpuru. Companylọ ọrụ ahụ kwuru na ngalaba a nwere ike ịkwado ndị ọrụ 8 n'otu oge na-arụkọ ọrụ na ọrụ 4K ma na-akwado nnweta dịpụrụ adịpụ, yabụ ndị ọrụ nwere ike ịnweta proxies na sistemụ ha n'ụlọ. Adv aced RAID nchedo na-enyere aka ichekwa akụ mgbasa ozi yana iji nchekwa steeti siri ike na-enyere aka melite arụmọrụ sistemụ niile. Axle ai na-agba ọsọ na igwe Linux na-arụ ọrụ na ihe arụ ọrụ WORKSPACE Xeon.
Ihe Nchekwa Digital 2020 na Akuko Mgbasa Ozi na Ntụrụndụ
The Nchekwa Digital nke 2020 maka Akụkọ Mgbasa Ozi na Ntụrụndụ, site na Coughlin Associates, na-enye peeji 251 nke nyocha miri emi banyere ọrụ nke nchekwa dijitalụ n'akụkụ niile nke mgbasa ozi ọkachamara na ntụrụndụ. E nyere atụmatụ na 2025 maka nchekwa nchekwa dijitalụ na njide ọdịnaya, post-mmepụta, nkesa ọdịnaya na nchekwa ọdịnaya dị na tebụl 62 na ọnụọgụ 129.
Nkwupụta ahụ ritere uru site na ọtụtụ ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ ahụ gụnyere ndị ọrụ njedebe na ndị na-eweta nchekwa, nke yana nyocha akụ na ụba na mbipụta ụlọ ọrụ na ọkwa, iji kee data gụnyere na akụkọ ahụ. N'ihi mgbanwe nke akụnụba nke ngwaọrụ nchekwa nke arụmọrụ dị elu nke siri ike ga-arụ nnukwu ọrụ n'ọdịnihu. Cloudgwé ojii na ngwakọ ngwakọ gụnyere ígwé ojii ahụ ewerewo ihe dị mkpa maka ọtụtụ ọrụ na-arụ n'oge ọrịa Covid-19. Mgbe ọrịa na-efe efe gafere, ojiji nke igwe ojii ga-aga n'ihu na-eto eto na mgbasa ozi nchekwa na ntụrụndụ na-aga n'ihu.
Nwere ike ịchọtakwu ihe ma nye iwu ozugbo tomcoughlin.com/product/digital-storage-for-media-and-ente metụtara-report/
 Nchekwa Digital 2020 na Media na Entertainment, Coughlin Associates, tomcoughlin.com/product/digital-storage-for-media-and-ente metụtara-report/
Tom Coughlin, Onye isi ala, Coughlin Associates bụ onye nyocha nchekwa dijitalụ na onye na-ahụ maka azụmahịa na teknụzụ. Ọ nwere ihe karịrị afọ 39 na ụlọ ọrụ nchekwa data yana injinia na njikwa n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Coughlin Associates na-agba izu, na-ebipụta akwụkwọ na akụkọ banyere ahịa na teknụzụ ma tinye na mmemme ihe nchekwa dijitalụ. Ọ bụ onye na-echekwa nchekwa na ebe nchekwa mgbe niile forbes.com na ebe nrụọrụ weebụ M&E. Ọ bụ onye ibe IEEE, Onye isi ala nke IEEE-USA ma na-arụsi ọrụ ike na SNIA na SMPTE. Maka inweta nkọwa ndi ozo banyere Tom Coughlin yana mbipụta ya na ihe omume ya www.tomcoughlin.com.
Previous: Sistem Ngosipụta ọgụgụ isi nke Densitron na-anapụta njikwa njiri mara “oke mgbanwe” maka NEP Netherlands
Osote: Ultimate RV Show na-aga Virtual, Custom Media Solutions na-anapụta Awa 49 nke afọ ojuju na FOR-A Switcher